QISO DHAB AH OO DHACDAY XASAN AWOOWE – Murtimaal
QISO DHAB AH OO DHACDAY XASAN AWOOWE
Waxaan ahaa Wiil Arday Dhigta Jaamacada, waxaan Xiriir lalahaa Gabdho Badan, laakin Gabar baa si aad ah Saaxiib u aheyn, waxaana ina Dhex maray Cilaaqaad aan Sharci ahayn. in Muddo Markaan wada Soconay ayaa Gabadhii waxey Qaaday Uur, Reerkoodii ayaa Ogaaday, waxayna u Sheegtay in aan Aniga Uureeyey. ka dib waxaa isoo Weeraray Walaalkeed,waxaana ku iri ma Aqaano Walaashaa ee Raadi Meesha ay kala timid Uurka. Ka dib wuu iga tagay.
Muddo ka Dib Maalin ayaa waxaan soo galay Gurigeenii Hooyaday oo Miyir beeshay oo Dhulka taala waxaan isku Dayey inaan Toosiyo wey soo toostay, wey Qeylisay, dib ayey Hadana u Miyir Daboolantay Mar labaad ayaan Kiciyey, weyna soo toostay, kolkaas ayaan ku iri Hooyo maxaa kugu Dhacay ?, waxey igu tiri Walaashaa, Walaashaa. ka dib ayaan ku iri:- Maxaa jira Hooyo Walaashey maxaa ku Dhacay ?. waxey igu tiri Walaashaa Waxaaa Uureyey Wiilka Deriska.
Ka dib Anigoo Xanaaqsan ayaan u aaday Wiilkii jaarka, waan Qabtay Markaan Damcay inaan Garaaco ayuu igu yiri:- War Ninyahow Ma Aqaano Walaashaa ee Raadso Meesha ay kala timid Uurka.
Durbadiiba waxaa Qalbigeyga ku soo dhacay hadalkii aan ku iri Gabdhii aan Jaamacada wada Dhigan jirnay ee aan Uureeyey Walaalkeed. Horaa loo yiri:- Zanadu waa Deyn kugu Maqan, waana lagaa Gudi.
Dhowr Sano ka dib waxaan Go’aansaday inaan Guursado Gabar ayaana Doontay, waana la ii Guuriyey Habeenkii Aqalgalka waan Fajacay oo waxaan la Kulmay la yaab Caruusada aan soo Guursadayba ma ahan Gabar, oo waxey ahaan Jirtay Zaaniyad Hore (waxaan Xusuustay Aayadii Quraanka ee dhaheysay:- Zaani ma Guursado Zaaniyad Mooyee).
Anoo Arrintaas la yaaban ayaa Gabadhii waxey igu tiri:- Walaloow i Ceeb Astur Alaah hakuu Ceeb Asturee. Intaan Qalbigeyga ku noqday ayaan iri:- ilaahoow ii Dembi Dhaaf Cuquubadii aan Galay ayaa leyga Gooynayaa. Sannado Markaan wada Joognay ayaa waxay ii Dhashay Gabar aad u Qurux badan Gabdhii Markay Gaartay 9 jir, waxaa Kufsaday Waardiyihii Cimaarada, wuuna Baxsaday.
Firo gaar ah
Ogoow waxaad ku Sameysid Gabdhaha kale, in lagu sameyn doono Walaashaada ama Gabadhaada, ilaaheey waa Xaqsoore, Dulmigana Raali kama ahan, Qof waliba wuxuu Geysto aya lagu samen dona allow ceybteyna astur inta muslim ah fadlan #shere dheh
Previous Post:Sh Axmed X. Saleebaan ( Duuliye) WANAAG FARISTA IYO XUMAAN REEBISTA
Next Post:Subxan Allah Nastexo indho aya ka danbaysa facebook Axmed Zaki ee la jabsaday